Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un wuxuu wacad ku maray inuu dhisayo milatari ‘aan laga adkaan karin’ ili ma qabato ah wuxuuna Mareykanka ku eedeeyay xiisadaha | Somalisan.com
Home Afsomali Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un wuxuu wacad ku maray inuu dhisayo milatari...
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un wuxuu wacad ku maray inuu dhisayo milatari ‘aan laga adkaan karin’ ili ma qabato ah wuxuuna Mareykanka ku eedeeyay xiisadaha
Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un wuxuu wacad ku maray inuu dhisayo milatari ‘aan laga adkaan karin’ wuxuuna Mareykanka ku eedeeyay xiisadaha
Hogaamiyaha dalka haysta hubka nukliyeerka ayaa sheegay inaysan jirin ‘saldhig’ lagu aamini karo in ficillada Mareykanka aysan ‘ahayn cadaawad’ inta lagu jiro bandhigga milateri
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa dib u eegay bandhig dhif iyo naadir ah oo ku saabsan nidaamyada hubka wuxuuna wacad ku maray inuu dhisi doono ciidan “aan laga adkaan karin”, maadaama uu ku eedeeyay Mareykanka inuu yahay “sababta asaasiga ah” ee xasillooni darrada.
Dadaal muuqda oo sii socda oo lagu doonayo in lagu kala kaxeeyo Washington iyo Seoul, Kim ayaa sidoo kale sheegay in waditaankiisa uu ku dhisayo milatarigiisa uusan ku wajahnayn Kuuriyada Koonfureed iyo inaysan jiri doonin dagaal kale oo iska hor keenaya dadka Kuuriya.
Kim ayaa khudbaddii Isniintii ka jeediyay “Bandhigga Horumarinta Difaaca Is-Difaaca-2021”, oo ah dhacdo loogu talagalay in lagu xuso maalintii hore ee 76-guuradii ka soo wareegtay xisbiga Shaqaalaha ee talada haya. Warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa ku warrantay inay tahay dhacdadii ugu horreysay ee noocan oo kale ah oo ay qabato Kuuriyada Waqooyi.
Isagoo ugu yeeraya Mareykanka “ilaha” xasilooni darrada ka jirta gacanka Kuuriya, Kim wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn ee dalkiisu uu yahay lahaanshaha “awood millateri oo aan laga adkaan karin” oo aan cidina ku dhiirran karin.
Maamulka Biden ayaa si isdaba joog ah u sheegay inaysan ujeedo cadowtinimo ka lahayn Woqooyiga, laakiin Kim wuxuu u sheegay bandhigga: “Aad ayaan u xiiseynayaa haddii ay jiraan dad ama dalal taas rumeysan.”
“Ma jiraan wax sal u ah ficilladooda inay rumaystaan ​​inaysan ahayn cadaawad,” ayuu raaciyay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.
Cinwaanka Kim ayaa yimid kadib markii Waqooyiga toddobaadyadii la soo dhaafay ay tijaabisay gantaal nooca riddada dheer ah, hub tareen laga soo tuuray, iyo waxa ay ku sheegtay in uu yahay madax-waji.
Pyongyang waxaa saaran cunaqabatayn badan oo caalami ah oo la xiriirta hubka nukliyeerka ee la mamnuucay iyo barnaamijyada gantaalaha ballistic -ga, kuwaas oo horumar degdeg ah ka sameeyay Kim.
Kuuriyada Waqooyi ayaa fulisay gantaal lidka diyaaradaha 30-kii Sebtembar, taasoo dhalisay kulan ay yeesheen golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku eedeysay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay laba jibbaar ka badan tijaabooyinka gantaalaha
Sanadkii 2017 -kii, waxay tijaabisay gantaallo gaari kara dhammaan qaaradda Ameerika waxayna fulisay illaa hadda qaraxii ugu xoogga badnaa ee Nukliyeer ilaa hadda, Pyongyang waxay sheegtay inay u baahan tahay hubkeeda si ay isaga difaacdo duullaanka Mareykanka.
Sannadkii 2018, Kim wuxuu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee Kuuriyada Waqooyi ee abid la kulma madaxweyne Mareykan ah oo fadhiya shir madaxeedka Singapore.
Laakiin geedi socodka wadahadalada ayaa inta badan taagnaa tan iyo markii kulan labaad oo ka dhacay Hanoi sanadkii xigay uu ku burburay cunaqabateyntii la saaray iyo waxa ay Pyongyang diyaar u tahay inay ka tanaasusho.
Maamulka Biden ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la kulmaan mas’uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi waqti kasta iyo goob kasta, iyada oo aan wax shuruud ah ku xirnayn dadaallada ay ku raadinayaan nukliyeerka.
Washington iyo Seoul waa xulafada amniga iyo saldhigyada Washington qiyaastii 28,500 oo askari oo ku sugan Koonfurta si ay uga difaacaan deriskeeda, oo ku soo duulay 1950.
Koonfurta iyo Mareykanka ayaa dhoolatus milateri si wadajir ah u qabtay bishii Ogosto. Ciyaaraha dagaalku waxay had iyo jeer ka cadhaysiiyaan Pyongyang, taas oo ka dhigaysa iyaga inay yihiin diyaargarowga duullaanka.
‘Splashes of color’ … Dalka waxaa loo arki karaa inuu yahay garoonkii ay ku abtirsadaan boqortooyadii Kim
Muuqaal daaha gadaashiisa ah: gudaha Kuuriyada Waqooyi – sawirro
Seoul lafteedu waxay ku jirtaa waddo balaayiin doolar ah si ay kor ugu qaaddo awoodeeda millatari, waxay si guul leh u tijaabisay gantaalkeedii ugu horreeyey ee gantaalaha ballistic-ga ah bishii Sebtembar-waxay Koonfurta ka dhigaysaa koox heer sare ah oo leh tikniyoolajiyad SLBM la xaqiijiyay-oo daaha ka qaadeysa safar aad u sarreeya. gantaal.
Toddobaadkii la soo dhaafay, Pyongyang iyo Seoul waxay dib isugu xireen khadkooda qadka-dhexe iyagoo calaamad u ah xiriirka sii dhalaalaya, iyadoo dhowr bilood oo kaliya ay xafiiska uga harsan yihiin madaxweynaha taageersan ee Koonfurta Moon Jae-in.
Laakiin Kim wuxuu Seoul ku eedeeyay “hami aan ka fiirsasho lahayn” iyo dabeecad “laba waji leh, oo aan caqli gal ahayn”.
“Isku daygooda aan xaddidnayn ee halista ah ee lagu xoojinayo awoodda milateri waxay burburinayaan isu dheelitirnaanta milateri ee gacanka Kuuriya iyo kordhinta xasillooni darrada milatari iyo halista”, ayuu raaciyay.
Bandhiggu wuxuu qayb ka yahay xuska sannad -guurada aasaaska xisbiga Shaqaalaha ee talada haya, waxaana ka mid ahaa duulimaadyada aerobatics iyo bandhigyada fanka dagaalka.
Pyongyang waxay xirtay xuduudaheeda horaantii sanadkii hore si ay isaga ilaaliso cudurka faafa ee coronavirus oo markii hore ka soo ifbaxay dalka dariska la ah ee Shiinaha, oo ah xulufadeeda diblomaasiyadeed ee muhiimka ah iyo bixiyaha ugu weyn ee ganacsiga iyo gargaarka.
Woqooyi waxay ku adkeysaneysaa inaysan qabin kiisas cudurka ah-khubaradu waxay ka shakisan yihiin sheegashada-laakiin xannibaadda iskiis u soo rogay ayaa si ka sii wanaagsan uga go’day nidaam kasta oo cunaqabateyn ah waxayna si xun u saameysay dhaqaalaheeda.
Kim wuxuu ku tilmaamay “xaaladda murugsan” khudbad dheer oo uu ku xusayey sannad -guurada xisbiga, isagoo ku baaqay edbin iyo daacadnimo.
Guddi khubaro ah oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa bishan sheegay in Woqooyiga ay sii wadeyso inay sii waddo horumarinta hubkeeda inkastoo ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale.
… Waxaan leenahay fadli yar oo aan ku weydiinno. Malaayiin ayaa u soo jeesanaya Mas’uulka maalin walba warar furan, madaxbannaan, tayo leh, akhristayaasha 180 waddan oo adduunka ah ayaa hadda naga taageera dhaqaale ahaan.
Waxaan aaminsanahay in qof walba u qalmo helitaanka macluumaadka ku saleysan sayniska iyo runta, iyo falanqaynta ku qotonta maamulka iyo daacadnimada. Taasi waa sababta aan u sameynay ikhtiyaar ka duwan: inaan ka dhigno warbixintayada mid u furan dhammaan akhristayaasha, iyadoo aan loo eegin meesha ay ku nool yihiin ama waxay awoodaan inay bixiyaan. Tani waxay ka dhigan tahay in dad badan si fiican loo wargelin karo, loo midoobi karo, looguna dhiiri gelin lahaa inay qaadaan tallaabo macno leh.
Waqtiyadan halista ah, urur-war-doon caalami ah oo run-raadis ah sida Ilaaliyaha ayaa muhiim ah. Ma lihin saamilayda ama milkiilaha bilyaneerka ah, taasoo la micno ah in saxafinimadeenu ay ka madax bannaan tahay saamayn ganacsi iyo mid siyaasadeed – tani waxay inaga dhigaysaa mid ka duwan. Markay waligeed ka sii muhiimsanayn, madaxbannaanidayadu waxay noo oggolaanaysaa inaan si cabsi la’aan ah u baaro, u babac dhigno oo aan u bandhigno kuwa awoodda leh. Ka taageer ilaaliyaha wax ka yar $ 1 – waxay qaadataa hal daqiiqo. Haddii aad awooddo, fadlan ka fikir inaad nagu taageerto qaddar joogto ah bil kasta. Mahadsanid.
Previous articleCiidamada Talyaaniga oo Deeq Daawo ah ku wareejiyay qaar kamid ah degmooyinka gobalka Banaadir (DAAWO SAWIRADS )
Next articleadna adan Waxaan murugada la qaybsanayaa walaalaheen Kenya, inshallaah Ha isdhiibina Somaliland way idin garab taagan tahay.
VIDEO Ganacsade ka badbaaday qarax miino oo gaarigiisa loogu dhajiyey
VIDEO Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay Xuska Maalinta Caalimiga ah ee Afka...
VIDEO Xildhibaanada iyo Wasiirada mooshinka ka wada Jawaari oo mar kale dalbaday in uu...